I-OnePlus 6T ayinazaziso ze-LED kwaye zezi zizathu | I-Androidsis
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikubonise zonke Iimpawu ze-OnePlus 6T emva kwenkcazo yayo esemthethweni. Iflegi entsha ye-OnePlus izisa amanqaku amatsha ambalwa xa kuthelekiswa naphambi kwayo, inotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi kunye nomfundi weminwe odityaniswe kwiscreen. Nangona zimbini iinkcukacha esiziphosileyo.
Kwisandle esinye I-OnePlus 6T ayinaso umfundi wesaziso se-LED kwelinye icala isixhobo asixhathisi uthuli namanzi. Kutheni le nto inkampani yaseAsia ithathe isigqibo sokuhambisa ezi mpawu zimbini? Ewe, izizathu ezibekwe yifemu ziya kukushiya uvule umlomo. Kodwa kubi.
Ezi zizathu zokuba kutheni i-OnePlus 6T ingenayo inkqubo yezaziso ze-LED
Ibiyi-OnePlus ngokwayo ebifuna ukunika iinkcazo kubathengi bayo ichaza izizathu zokuba kutheni umenzi wayo engafakwanga Ii-LED zesaziso kwi-OnePlus 6T. Ngokutsho kwenkampani, abasebenzisi bombulali wayo omtsha kufuneka bathathe ifowuni kwitafile ukuze babone izaziso kuba isikrini sivula ngokuzenzekelayo ukuze bangaboni mfuneko yokuba nesaziso se-LED.
Kwaye ukuxhathisa kwamanzi? Ukuba impendulo yokuqala sele ibonakala ngathi ayihlekisi, isizathu sokuba bengafuni ukubandakanya isiqinisekiso se-IP67 okanye se-IP68 sokwenza Ukuxhathisa kwamanzi kwi-OnePlus 6T iba neentloni ngakumbi. Ngokomvelisi, ngokusetyenziswa kwemihla ngemihla kwe-OnePlus 6T, awudingi naluphi na uhlobo lwenqanaba lokumelana namanzi. Ifemi ithi ukuba i-terminal iyanetha ngokutshiza, akukho nto iya kwenzeka kuyo, ke olu hlobo lwesatifikethi luyafuneka kuphela kwiimeko ezigwenxa.
Kwi-OnePlus ityala eligqithisileyo kukuthatha ifowuni ukuya kwigumbi lokuhlambela ngelixa sihlamba ukumamela umculo? Kutheni abasebenzisi abaninzi besebenzisa ifowuni ngolu hlobo kwaye ukuba ayinamanzi, ukufuma okuveliswe ngexesha lokuhlamba kungonakalisa isixhobo? Okanye ngaba ucinga ngokugqithileyo ekubeni uyakwazi ukuthatha ifowuni yakho uyise elwandle okanye echibini ngoxolo lwengqondo ukuba akukho nto izakwenzeka kuwe? Ngaba kugqithisile ukubanjwa yimvula ngononophelo kwaye kufuneka sibeke umnxeba ngaphandle kokuqhubeka nokumamela umculo ngenxa yokoyika ukubamanzi ngelixa siphethe epokothweni?
Inyani yile yokuba i-rImimandla esebenzisa i-OnePlus ukubonelela nge-OnePlus 6T ngenkqubo yesaziso se-LED okanye ukumelana namanzi ziye zabonakala ngathi sisizathu esingenasihlahla. Namhlanje inkqubo yesaziso se-LED isasebenza kakhulu kumsebenzisi. Akuncedi nto ukuba ndithathe umnxeba ukuze ndibone ukuba ukhona umntu ondithumelele umyalezo ukuba andinayo indlela yokufumana isaziso. Kungenzeka ukuba ngenxa yemeko kufuneka sibe nefowuni ethe cwaka etafileni kodwa sinomdla kwi-imeyile okanye umyalezo othile kwaye ngesaziso se-LED sinokwazi ukuba sifikile.
Kwaye ngokucacileyo asizukuhlala sithatha umnxeba ukubona ukuba sifumene nasiphi na isaziso. Kwaye umxholo we ukumelana namanzi kwi-Oneplus 6T Impendulo yomenzi ibonakala ngathi iphambuka ngakumbi kuthi. Kutheni isiqinisekiso se-IP68 okanye se-IP67 singazukubaluleka namhlanje? Ukuba sithatha ifowuni naphina, eyona nto intle kukuba ikhuselekile kwaye umbono wokuba iselfowuni exabisa phantse i-euro ezingama-600 iba yiphepha elinexabiso eliphezulu kwimeko apho limanzi ngenxa yaso nasiphi na isizathu ekubonakala kulihlazo kuthi.
Ngethamsanqa sinazo ezinye iindlela kwi-OnePlus 6T inomdla ngokwenene kwaye banokunganyangeki kwamanzi. Nangona uluvo lwakho, sicebisa ukuba usebenzise isibonelelo seAmazon sokuthenga i-Samsung Galaxy S9 ebiza ixabiso elingaphantsi kwe-OnePlus 6T kwaye inezinto ezifanayo, isikrini esibonakala ngcono, inkxaso kwiiglasi zakho zokwenyani zeSamsung Gear VR, umfundi wezaziso kwaye ewe unesiqinisekiso se-IP68 ukuze ukwazi ukuthatha ifowuni yakho naphina ngaphandle kokukhathazeka nangantoni na.
Thenga i-Samsung Galaxy S9 ngexabiso elihle kwiAmazon
Kananjalo ukuba sithathela ingqalelo eyethu Thelekisa i-OnePlus 6T kunye ne-OnePlus 6 Siyabona ukuba umahluko phakathi kweemodeli ezimbini bambalwa kakhulu, nto leyo eyenza kucace ukuba kukho iindlela ezingcono onokuthi uziqwalasele. Kwaye ngeempawu ezingcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » I-OnePlus icacisa ukuba kutheni i-OnePlus 6T ingenazaziso ze-LED okanye ukumelana namanzi
Kungcono uthenge i-OP6t nge-4 lamawaka 506 Gb ye-RAM kunefowuni enokukulawula ngemini enethayo.
Ungalitshintsha njani igama lefowuni yakho ukuyichonga kuGoogle Play